Tag: fanekena | Martech Zone
Hatraiza ny maha-zava-dehibe ny sary amin'ny atiny nomerika?
Alarobia, Oktobra 3, 2018 Asabotsy 13 Febroary 2021 Douglas Karr
Ny sary dia mpanavakavaka iray lehibe izay ampiasainay isaky ny paikady atiny rehetra ataoko ho an'ny mpanjifanay. Izahay dia mandany betsaka, bebe kokoa aza, amin'ny famolavolana sary sy mpaka sary noho ny amin'ny fikarohana sy ny fanoratana. Ary ny valiny amin'ny fampanjariam-bola dia mandoa foana. Manokana ho an'ny sary, tsy misy dikany amiko raha mandany $ 5k ka hatramin'ny $ 100k ny orinasa iray amin'ny fisianà tranonkala vaovao fa aza mandany vola an-jatony dolara
Netra dia fanombohana mamolavola teknolojia Fampahafantarana sary miorina amin'ny fikarohana AI / Deep Learning natao tao amin'ny MIT's Computer Science and Artific Intelligence Laboratory. Ny rindrambaiko Netra dia mitondra firafitra amin'ny sary tsy voaorina teo aloha miaraka amin'ny mazava tsara. Ao anatin'ny 400 milliseconds, Netra dia afaka manisy marika ny sary notarafina ho an'ny marika marika, ny sarin'ny sary ary ny toetran'ny olona. Mizara sary 3.5 miliara amin'ny media sosialy isan'andro ireo mpanjifa. Ao anatin'ny sary zaraina ara-tsosialy dia misy fahitana sarobidy momba ny hetsiky ny mpanjifa, ny zavatra mahaliana azy,
Tsy misy herinandro izay mitohy Martech Zone fa izahay dia tsy mitahiry sy mizara ny zava-misy, hevitra, tsonga, ary ny atiny hafa aza amin'ny alàlan'ny infografika sy boky hafa. Tsy tranokala fitsaboana ho an'ny atin'ny olon-kafa anefa izahay. Ny fizarana ny hevitry ny olon-kafa dia tsy mahatonga anao hanana fahefana fa manaiky sy manamafy ny fahefan'ny mpanoratra izany. Saingy… ny fanatsarana, fanehoan-kevitra, fitsikerana, fanehoana an-tsary ary fanazavana tsara kokoa ny atin'ny olon-kafa dia tsy hoe manaiky sy manatanjaka fotsiny
Talata, Desambra 10, 2013 Talata, Desambra 10, 2013 Douglas Karr
AdTruth dia rindrambaiko eo an-toerana ahafahan'ny mpivarotra mahafantatra ny mpampiasa azy amin'ny tranonkala sy fampiharana finday. Ny AdTruth dia miasa miaraka amin'ny haitao misy anao hamantarana, kendrena ary hanarahana ny mpampiasa raha mitazona ny tsiambaratelo sy ny safidin'ny mpanjifa. Ny ankamaroan'ny haitao fampahafantarana ny mpampiasa dia mitaky fidirana hahafantarana ilay olona sy / na cookie iray hanarahana azy ireo. Ny olana amin'ny cookie dia matetika voafafa izy ireo ary tsy maharitra ihany koa. AdTruth dia mampiasa mpanondro fitaovana maharitra - fa tsy a